Fandraisana trano amin'ny varotra nomerika - TELES RELAY
By bryanekobe On Jona 16, 2020
Ny fomba integral dia kendrena ho sehatra iray amin'ireo mpandraharaha tanora ho an'ny kaontinanta afrikanina. Izy io dia mandrisika ny fampiroboroboana ny kontinanta malalantsika amin'ny alàlan'ny dinamika, sy ny firehetan'ny fahatanorany. Mino izy fa lasa tsara kokoa ho an'ireo tanora afrikanina rehetra ireo izay very fanantenana eto amin'ity kaontinanta ity, dia ny matotra mahavelona maha-olombelona. Avelao ny tenanao ho ampahany iray amin'io nofinofy io mba ho tanteraka amin'ny alàlan'ny tranonao, sehatra ho antsika rehetra ...
Izahay dia mandray ny serivisy ara-barotra momba ny filànay ny fananganana fahitana sy ny hetsika famakiana an-tserasera.
Handalo fiofanana mialoha ianao, ary aorian'ny fanamarinana dia hiasa haingana ianao avy hatrany.
Ny karamanao dia manodidina ny 50 CFA franc ka hatramin'ny 000 CFA francs, raha miasa sy manaraka tsara ny torolalana ataonay ianao.
fividianana ny fikaonan-tsarimihetsika Microfinance
Mijanona ho namana amin'ny sakaizanao, tsara na ratsy hevitra?